Mampiseho Ny Disadisa Misy Eo Amin’Ireo Tanora Sy Ny Ray aman-dreny Ao Shina Ilay Horonantsary ‘Tiny Times’ Novokarin’ny Blockbuster · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jolay 2013 12:20 GMT
Mampiseho ny disadisa misy eo amin'ireo tanora sy ny ray aman-dreny ao
Shina ilay horonantsary Tiny Times (Xiao Shidai) novokarin'ny Blockbuster tamin'ny lohataona, tantaranà tovovavy efatra mitondra ny marika akanjo lafo vidy, vokarin'ireo matihanina amin'ny lamaody ary ahitàna toerana mahafinaritra, izay mahatonga ny adihevitra ao Shina mikasika ny fitiavan'ireo tanora Shinoa rendrarendra amin'izao fotoana izao.
Tiny Times, nalaina avy amin'ilay tantara mitohy nosoratan'i Guo Jingming, izay nandiso ny vinavina tao Shina tamin'ny isa marobe azony ny andro voalohany namoahana azy ary nitazona ny laharana voalohany tamin'ny filaharan'ireo “box-office” hatramin'ny fotoana nivoahany ny 27 Jona 2013. Ny tohiny, izay voafaritra fa hivoaka ny volana Desambra, dia efa vonona amin'izao fotoana izao hisokatra ho an'i Shina amin'ny 09 Aogositra.
Mitantara ny fiainan'ireo tovovavy efatra izay efa any amin'ny Oniversite ilay horonantsary, izy ireo moa dia efa mpinamana tsy nifankafoy nanomboka tany amin'ny Lisea. Mibahana indrindra ao ny lohahevitra toy ny fikatsahana ny fahombiazana, fitiavana sy ny finamanana, avy hatrany dia mampahatsiahy ilay horonantsary Amerikana Sex and the City sy ilay Gossip Girl na koa ilay horonantsary the Devil Wears Prada ny fizotran'ilay horonantsary.
Guo Jingming, izay mpamokatra sady mpandrindra ilay horonantsary no mpanoratra manankarena indrindra ao Shina ary tonga misolo tena ny ‘andian-taranaka Me’ tanora indrindra ao amin'ny firenena, andian-taranaka teraka taorian'ny taona 1980, izay lehibe tao anatin'ny fotoana nisondrotan'i fanjifàna fandanilanian'i Shina nanomboka ny taona 1990, noho ny tantara malazany ho tanora zanak'antitra. Teraka ny taona 1983 avy aminà fianakaviana tsotra ary nitafy tsotra, nanomboka niseho vahoaka tamin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe “The City of Fantasies” – TAnanan'ny fizintizintiana – raha vao 20 monja. Najanony ny fianarany tany amin'ny Oniversite ary nanomboka nanomboka ny fanaovana fanontana izay azy manokana izy. Tamin'ny taon-dasa, tafakatra teo amin'ny lisitry ny Shinoa Manankarena tao amin'ny “Forbes” tamin'ny fahatraran'ny fidiram-bolany ho 27.6 tapitrisa yuan [45 tapitrisa dolara Amerikana] isan-taona.
Miaina fiainana lafatra izy ary tsy mitsoaka ny mason'ny vahoaka izany. Tao aminà tafatafa iray vao tsy ela izay [zh] dia hoy i Guo hoe : “Tsy afaka ny hanova ny fiarahamonina amin'ny herin'ny tenanao irery ianao. Kanefa afaka ny hibaiko ny lalànan'ny fiarahamonina ianao, ary hampiasa izany hanoherana ny hafa.”
Na dia eo aza ny fahombiazany any amin'ny ” box office”, dia niatrika onjam-panakianana maro ilay horonantsary. Ireo filazam-baovao lehibe, ireo mpanoratra antitra taloha sy ireo mpitantana maro no tena nanao ny fanakianana, izay manameloka ilay horonantsary noho ny lazany amin'ny fampiseho be fahatany ny rendrarendra tsy misy dikany sy ny zavatra ivelany ihany.
Ilay mpitsikera horonantsary fanta-daza, Zhou Liming (@周黎明), dia nanamafy fa be loatra ny fanehoana harena ao anatin'ilay horonantsary [zh]:
Tsy zakako intsony ny mijery ilay horonantsary. Mifanohitra amin'ireo fampisehoana lamaody any amin'ireo gazetiboky amidy izay mampiseho ny fitiavana fitaovana amin'ny alalan'ny nofinofy mahafinaritra, ny fampisehoan'i Guo ny harena sy ny hatsaran-tarehy kosa dia tena ratsy, toy ireo izay efa noana nandritry ny fotoana maro ka nahita sakafo tampoka teo ambony latabatra, tsy fahampiana fitoniana miharo hafaliana tampoka.
Ilay mpanoratra tantara an-dampihazo, Maguashihang (@鹦鹉史航), dia nampita ny nolazain'i Zhou ary nanakiana ilay mpanao horonantsary malaza mihitsy aza :
Zavatra iray ihany no marina ao amin'ilay Tiny Times – avy amin'ny ambaratonga ambany no nifidianan'ilay mpandrindra ireo mpanao sarimihetsika izay tsy afaka ny hanatanteraka izany araka ny tena izy
Samy nahazo fanakianana avokoa ny fanehoan-kevitr'i Zhou na ny an'i Maguashihang, na avy amin'ireo mpitia an'i Guo Jingming, na ireo mpitia ireo mpilalao lahy sy vavy ao anatin'ilay horonantsary. Maro ireo nanoratra fa efa nilaozan'ny toetr'andro ireny fanakianana ireny amin'izao fiainana natao ho an'ny tanora izao. Ilay Tale, Ning Caishen (@宁财神), dia nanakiana ilay fanakianana “nilaozan'ny toetr'andro” :
Tiny Times dia iray amin'ireo tantara mora raisina izay mikendry ireo tanora mpankafy azy. Mahatezitra ahy fotsiny ireo olon-dehibe toa an'i Zhou Liming sy Maguashihang, sns. Takatro ny hatezeran'izy ireo, kanefa izy ireo ihany no nanao fandrika ho an'ny tenany tamin'ny nidirany anaty ady lehibe amin'ny tsy fahafantarany akory ny toerana misy azy, resy tamin'ny ady madinika ary mizotra makany amin'ny fahasosorana.
Nihanafana ilay adihevitra tao amin'ny filazam-baovao Shinoa taorian'ny nidiran'ilay gazety mpiseho isanandro People’s Daily an'ny Antoko kaominista Shinoa tao anatin'ilay resaka ary nanaratsy ilay horonantsary. Ary raha toa ka tsy iray ihany ny fanakianana nataon'ilay gazety, dia lasa nisarika ny fifantohan-tsain'ireo mpamaky azy hihataka tamin'ny fanakianana ilay horonantsary ho any amin'ny ady atao amin'ny ezaky ny filazam-baovaom-panjakana hifehy ny foto-pisainan'ny olona:
@”Senior student Beidao” Na dia mbola tsy hitako sady tsy antenaiko ho ankafiziko aza ilay horonantsary, dia tsapako fa toa manatombo, maniusy sira be ihany ny filazan'ilay People’s Daily momba ny hasin'ilay horonantsary. Tsy avy amin'ilay horonantsary akory no nipoiran'ny rendrarendra sy ny fandanilaniana. Tokony hijery akaiky ny tena antony nahatonga ireny trangam-piarahamonina ireny ny People’s Daily fa tsy variana manakiana ny andraikitry ny fampianarana ny olona anatin'io horonantsary io.
Zhu Xuedong : Taona mahatsiravina indrindra natao ho an'ny fikarakarana zaridaina ny taona tsy ahafahana manao afa-tsy ny “Big Time” – Fotoan-dehibe – fa tsy ny “Tiny Time” – Fotoana Bitika. [Raha tsy hijery afa-tsy ny fotoana nibaikon'ny fitondrana ny olona teo amin'ny sehatry ny fambolena. Noraisin'ny maro izany fomba fiteny izany hanondroana ny fiombonana tsy refesi-mandidy.] Ao aminà fiarahamonina iray miompana amin'ny fambolena” , dia ny mpikarakara zaridaina hatrany no manampahefana mpibaiko ny fiainan'ny hazo sy ny bozaka. Ny fiarahamonina toy ny fikarakara zarizaina anefa no tena fahavalo lehibe ho an'ny olombelona.
11 ora izayHong Kong (Shina)